Search မြန်​မာအိုများ - GenFK.com
မြန်မာတခွင် (မြန်မာအများ မခံစားနိုင်သေးတဲ့ စိတ္တဇပန်းချီ)
မြန်မာတခွင် (မြန်မာအများ မခံစားနိုင်သေးတဲ့ စိတ္တဇပန်းချီ) နားလည်ရခက်တယ်လို့ တချို့မြင်ကြတဲ့ Abstract အမျိုးအစား စိတ္တဇပန်းချီတွေအပေါ် နားလည်ခံစားတတ်တဲ့လူတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်မများလှဘူးလို့ Abstract ပန်းချီဆရာ ဦးမျိုးခင်က ပြောလိုက်ပါတယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ ထန်းရိပ်ညို အနုပညာပြခန်းဆီကို မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကနေ မသိင်္ဂီလင်းနဲ့အတူသွားပြီး ပန်းချီဆရာ ဦးမျိုးခင်ရဲ့ Abstract ပန်းချီကားတွေကို ခံစားကြည့်နိုင်မှာပါ၊
18 Oct 2015 · 19K views
အာရှငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ ခေတ်သစ်ကျေးကျွန် ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပိုင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေကြ တဲ့ မြန်မာအများ စုပါဝင်တဲ့ငါးဖမ်းသမားတွေဟာ နားရက်မရှိအလုပ် လုပ် ကြရတဲ့အပြင် လှောင် အိမ်တွေ ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ခံရတာ၊ ရိုက်နှက်ညှင်း ပမ်းခံရတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အေပီ သတင်းဆောင်းပါးကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြထားပါတယ်။
27 Mar 2015 · 8.1K views
#ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း ”နှင့်” #အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာဆိုသည်မှာ... 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳(#Copy.24.12.2019) 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿(#ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ) (#မှားမှန်းသိလျှက်နဲ့မပြင်ဘဲအများနောက်လိုက်ရင် #အမှားးတွေကြာပြီးအမှန်တွေပျောက်ကွယ်သွားမယ်) (#ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးပေးချင်တဲ့ပို့စ်တစ်ခုပဲ) "ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများ"ရဲ့ "လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတွေအကြောင်း"-စာတွေရေးပေးနေတာသိတော့ "ဒကာတစ်ယောက်"က.... “အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ မြန်မာ တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမှာ အဲဒီလိုပဲ သတ်သေပြီးသေရတယ်-ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား၊ "ဟုတ်တယ်"ဆိုရင်, တပည့်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ- ရဟန်းတစ်ပါး ဟာ ကိုယ့်လည်ပင်း ကိုကိုယ် ဓားနဲ့လှီးပြီး သတ်သေသွားပေမယ့် အဲဒီအခိုက်မှာ "ရဟန္တာ" ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ "ရဟန္တာ"ဖြစ်သွားရင် နောင်ဘဝ မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လားဘုရား၊ ဒါဆိုရင်, ဒီ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ခံရတဲ့ကိစ္စ တပည့်တော် ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ဘုရား”လို့ မေးဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ "ဒကာ"ပြောမှပဲ ဘုန်းဘုန်းအတွေးထဲမှာ, ဒီ"အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ ကိစ္စ"နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွဲနေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အလွဲကို တင်ပြပေးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းနဲ့ အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာအကြောင်း"ကို "လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတစ်ခုအဖြစ်" အခုလို တင်ပြဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, အဲဒီလို- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် နောင်ဘဝ တွေမှာလည်း ဘဝပေါင်းငါးရာ တိုင်အောင် အခုလိုပဲ သတ်ပြီး သေရတယ်"ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ အတော့်ကိုလွဲနေတဲ့ အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရား ဟောမဟုတ်သလို... ကျမ်းဂန်မှာပါတဲ့အချက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ "ပိဋကတ်တော်"မှာလာတဲ့ "ဇာတ်တော်တစ်ခု"တော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ"ဇာတ်တော်"က- “ဧကနိပါတ် ၊ မတကဘတ္တဇာတ်” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ"ဇာတ်တော်"မှာ "ဒိသာပါမောက္ခ ဆရာကြီးတစ်ဦး"ဟာ, "သေသူ"ကို ရည်စူးပြီး "ဆိတ်တစ်ကောင်"ကို သတ်ဖို့ ရေချိုးပေးချိန်မှာ အဲဒီ"ဆိတ်"ဟာ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ရယ်လည်းရယ်ပြီး၊ ငိုလည်းငိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ "ဆရာကြီး"က... "ဘာကြောင့် ရယ်လည်းရယ်၊ ငိုလည်းငိုတာလဲ?"လို့မေးတော့ "ဆိတ်"က, “ကျွန်ုပ်လည်း အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာ... အခု ဆရာကြီးလိုပဲ ဆိတ်တစ်ကောင်ကို လည်ဖြတ်သတ်ခဲ့မိလို့ အဲဒီ..."အကုသိုလ်ဝဋ်ကြွေး"ဟာ ဒီဘဝ အထိ "ဘဝပေါင်း (၄၉၉)ဘဝ" တိုင်တိုင် လည်ဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း။ ဒီလိုဝဋ်ကြွေးကို နောက် တစ်ဘဝပဲ ခံပြီးရင် ကုန်ဆုံးတော့မှာ... ဖြစ်တာကိုတွေးပြီး ဝမ်းသာလို့ ရယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့။ ငိုတာကတော့- အခု အကျွန်ုပ်ကို သတ်မယ့် "ဆရာကြီး"လည်း ကျွန်ုပ်လိုပဲ "ဘဝပေါင်းငါးရာ အသတ်ခံရတော့မှာပါလား"လို့ တွေးပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတဲ့အတွက် ငိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ "ဆရာကြီး"ဟာ ကြောက်လန့်ပြီး "ဆိတ်"ကိုမသတ်တော့ဘဲ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်... "အကုသိုလ် ဝဋ်ကြွေး"ရှိတဲ့ "ဆိတ်"ဟာ တစ်နေရာမှာ "မိုးကြိုး"ထိလွင့်​လာတဲ့ "ကျောက်ချပ်"ထိပြီး လည်ပင်းပြတ်ကာ သေသွားခဲ့ရပါတယ်။ "ဝဋ်ကြွေး"ပါလာတော့တစ်ဦး မသတ်လည်း တစ်ခုခုနဲ့ သေသွားရတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ"ဇာတ်တော်လာ အကြောင်းအရာ"ကိုကြည့်ရင်- "ဆိတ်"ဟာ အတိတ်ဘဝ လူဖြစ်စဉ်က "ဆိတ်တစ်ကောင်"ကို သတ်ခဲ့မိတဲ့ "ဝဋ်ကြွေး"ကြောင့် "ဘဝပေါင်းငါးရာ"တိုင်အောင် အသတ်ခံပြီး​​ သေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလို့ "အဖန်ငါးရာ၊ ဘဝငါးရာ"ခံရတာ မဟုတ်ဘဲ, သူများကို သတ်မိတဲ့ "အကုသိုလ် ဝဋ်ကြွေး"ကြောင့် ဘဝပေါင်းများစွာ အသတ်ခံရတဲ့ ဇာတ်တော်လာ အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ"ဇာတ်တော်"လာ အကြောင်းကို "နားစွန်နားဖျား" ကြားမိရာက "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ၊ငါးကမ္ဘာ ခံရတယ်"ဆိုပြီး မြန်မာများ အမှတ်လွဲနေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့... "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အတွက် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာအထိ အဲဒီလို ထပ်တူသတ်သေရမယ်"ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ "လွဲနေတယ်"ဆိုတာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတော့- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ခံရတာမဟုတ်ဘူး"ဆိုပြီး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာလည်း မလုပ်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။ လူအတော်များများက မဟုတ်တာဆို သိပ်ပြီးအတုယူတတ်တာ ဆိုတော့ သူများသတ်သေတာတွေကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်​ သတ်သေမိမှာစိုးလို့ ပြောရတာပါ။ သေချာစဉ်းစားရမှာက... အဲဒီလို စိတ်ညစ်လို့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတဲ့ သူတစ်ယောက်"ရဲ့ "သေခါနီး စိတ်အစဉ်"ဟာ, ဘယ်လိုမှ "ကောင်းတဲ့စိတ်အတွေး" မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်လိုက်မယ်ဆိုရင် “ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝ” မှာ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ "သေခါနီးမှာဖြစ်တဲ့ စိတ်အစဉ်"ဟာ နောက်"ဘဝ"မှာ အရင် အကျိုးပေး တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် "သေခါနီးစိတ်အစဉ်"ဟာ "အထူးသတိပြုရမယ့် အချက်"ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ကား "သတ်သေမှု"နဲ့ ပတ်သက်ပြီး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာနဲ့ သူတပါးကို သတ်လိုက်တာ မှာ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အတွက် ဘဝငါးရာ အဖန်ငါးရာ အဲဒီလိုပဲ သတ်ပြီးသေရတယ်"ဆိုတာ... အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စကားဖြစ်ကြောင်းနဲ့၊ သူတ​ပါးကို ကိုယ်က သတ်တာဆိုရင်တော့, သတ်တဲ့"စိတ်စေတနာ"အတိုင်း ဒီ"အကုသိုလ် ဝဋ်ကြွေး"ကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရတတ်ပြီး,"အကုသိုလ်"အပြစ် သိပ်ကြီးရင် "ဘဝပေါင်း ငါးရာ"အထိတောင် ခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုအပိုင်း"မှာလည်း- "ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်"ကိုမြင်ပြီး "ခန္ဓာကိုယ် ကို ငြီးငွေ့လို့ သတ်လိုက်တဲ့ အပိုင်း"မှာ "အပြစ်မရှိ"ပေမယ့်။ "ဒေါသအလျောက် သတ်မိရင်"တော့ အပြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ "အပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်"ဆိုတာ ခုနပြောသလို "သေခါနီး စိတ်အစဉ်"ဟာ မကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်, "သေပြီးနောက် အပါယ်ဘုံဘဝ"တွေအထိ ရောက်စေနိုင်တာဖြစ်လို့ "အပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်"လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဗုဒ္ဓ"လက်ထက်က “ဝဂ္ဂလိ” အမည်ရှိတဲ့ "မထေရ်တစ်ပါး"ဟာ"ခန္ဓာကိုယ်"ကိုငြီးငွေ့ပြီး "ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပြစ်"ကိုမြင်တဲ့အတွက် "ကိုယ့်လည်ပင်း ကို ဓားနဲ့ဖြတ်ပြီး သတ်ခဲ့တယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်, အဲဒီ"မထေရ်"ဟာ ဒီအခိုက်မှာ "ဝေဒနာ"ကိုရှု လိုက်တဲ့အတွက် "ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်"-လို့ “ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ် ပါဠိတော် (၄၉)” မှာ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်- "ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပြစ်"ကိုမြင်ပြီး "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အပိုင်း"မှာ ဒီလိုသတ်သေလိုက်တဲ့အတွက် "အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ခံစရာမရှိတော့ဘူး"ဆိုတာ သတိပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက- မြန်မာအများ အမှတ်မှားနေကြတဲ့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ အဲဒီလိုပဲ သေရတယ်"ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လွဲနေတဲ့ အယူအဆဖြစ်ကြောင်း၊ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်တဲ့ကံ"မဟုတ်ဘဲ "သူများကို သတ်ခဲ့တဲ့ ပါဏာတိပါတ ကံ"မျိုးကသာ "ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံ အကြီးအသေး"ကိုလိုက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ "ဘဝ ပေါင်းငါးရာ"အထိ ပြန်လည် အသတ်ခံရတတ်ကြောင်း ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အပိုင်းမှာ "ပါဏာတိပါတကံ မမြောက်"တဲ့အတွက် "ပါဏာတိပါတကံ ကို ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်"အတိုင်း ပြန်ခံရတာတွေ မရှိပေမယ့်, "လောကဓံ"ကို မခံနိုင်လို့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့ သူတစ်ယောက်"ဟာ အသေ မကောင်းတဲ့အတွက် "ဘဝကူး" လည်း မကောင်းနိုင်တာဖြစ်လို့ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာလည်း လွဲနေတဲ့ အလွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း" သိစေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်- "လွဲနေကြတဲ့ အလွဲ"တွေထဲမှာ- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ အဲဒီလိုပဲ သတ်သေရတတ်တယ်"ဆိုတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ "အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အလွဲဟာလည်း နည်းနည်းလေးမဟုတ် "အများကြီးကို လွဲနေတဲ့ အလွဲတစ်ခု"သာ ဖြစ်တဲ့အတွက်။ ဒီလိုအလွဲမျိုးကို... အစဉ်အဆက် အရိုးစွဲနေအောင် မလွဲမိကြဖို့နဲ့ တကယ် သတ်ချင်တယ်​ဆိုရင်​ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ရှိနေတဲ့ “ကိလေသာ”တွေကိုသာ အပြီးသတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ အသိပေးတိုက်တွန်းရင်း.... လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတစ်ခုအဖြစ် အသိဝင်ကာ ပြုပြင်နိုင်ဖို့ စေတနာထား မေတ္တာအားဖြင့် အသိစကား ပါးလိုက်ရပါတယ်။ ဖတ်​ဖူး မှတ်​သားဖူး​သောစာစုများကို ဓမ္မဒါန ပြန်​လည်​မျှ​ဝေပူ​ဇော်​ပါသည်။
24 Dec 2019 · 893 views
ရခိုင်ကျောက်ရိုးရာဇ၀င် အနာဂတ်သို့ဗျာဒိတ်စကားများ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #ရခိုင်ပြည် ဓညဝတီ၌ စန္ဒသူရိယမင်း လက်ထက်အခါက မြတ်စွာဘုရားသည် ဓညဝတီသို့ကြွရောက်တော်မူပြီး ကျောက်တော်မြို့ ဝက်သတိုးတောင်၌ တစ်ဝါကျဉ်းအောင်းတော်မူစဉ် စန္ဒာသူရိယမင်း လျှောက်ထား၍ ဘုရားသျှင် ဗျာဒိစကား မိန်းတော်မူခဲ့သည်။ “တကာတော် ငါ၏သာသနာ ကုန်ဆုံးလုနီးအခါ လူသားတို့ ကာလပြောင်းပြန် ဆုတ်ယုတ်လျှက် သာသနာသည် လူ့လောက၏ အမှားဖြစ်ရန်အကြောင်းကို မိန့်ကြားတော်မူသည်။” ထိုမိန့်ကြားတော်မူသည့် ဗျာဒိစကားကို ၎င်းအတိုင်းပင် ရခိုင်ကျော်ရိုးရာဇဝင်၌ အထင်အရှားရှိနေပေသည်။ ၎င်းဗျာဒိစကားမှာ-- (၁)-မုသားမပြောလျင် လူမိုက်၊ မကောင်းကြံလျင် သမာဓိ၊ ပညာရှိကိုဖယ်၍ထား၊ မိုက်နိုင်မှသောတာပန်၊ ကုန်းတိုက်လျင် ကျေးဇူးရှင်၊ မုန့်ပေးလျင် ကျမ်းကန်တတ်၊ ရွှေကပ်သည့် ဘုရားမှလူရိုသေ၊ ဖြစ်လိမ့်မည်။ (၂)-သာသနာသက္ကရာဇ်=၂၅၀၀-ကျော်သည့်အခါ ပြည်ရွာဆူပူဖြစ်လိမ့်မည်။ (၃)-တိုင်းသူပြည်သား၊ ယောက်ျား မိမဟူသမျှမှာ ရန်စမအေး စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်၊ တဖန် ဒါးမြ သူပုန်ထ၍၊ ရာဇာလုပ်သူ အေးမူမရှိ ဖြစ်လိမ့်မည်။ (၄)-မင်းကအလွတ်၊ ပြည်ဥပါဒ်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ (၅)-သူမင်း၊ငါမင်း၊ အချင်းချင်းလည်း စစ်ခင်းထိုခါများလိမ့်မည်။ (၆)-ရဟန်းစစ်ကမနာလို၊ ပြည်ရွာကို နှစ်ခြမ်းခွဲလိမ့်မည်။ (၇)-အရွာရွာမှာ ကြင်နာမှုကင်း ဒေါသပြင်း၍ အဘတစ်ခြား သားတစ်ခြားလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ (၈)-ပို့ဆွမ်းမနိူင်၊ ကိုယ်တိုင်ချက်စား ရဟန်းများလည်း သပိတ်မသုံး အိုးကိုသုံးလို့ ဂတုံးထိုခါများလိမ့်မည်။ (၉)-ထိုသည့်အခါ ယောက်ျားများလည်း ရှေ့ကအထုံး ယောင်ထုံးလည်းပျောက် ဆံတော်နှင့်လည်းများလိမ့်မည်။ (၁၀)-ဆေးတန်မဟုတ် ၀ါးခေါင်းပိုင်းကို အဟုတ်ထိုခါ သောက်လိမ့်မည်။ (၁၁)-၀ိပဿနာ အရွာရွာမှာ သူ့ဟာမမှန် ငါသာမှန်၍ ငြင်းခုန်ရန်စပွါးလိမ့်မည်။ (၁၂)-မိန်းမလင်ပြန် အမှန်ထိုခါများလိမ့်မည်။ (၁၃)-ထပိန်ပါးပါး အင်္ကျီပါးကို အများမိန်းမ၀တ်လိမ့်မည်။ (၁၄)-ရှက်ကြောက်ကင်းကွာ ထိုအခါလည်း အမှန်မုချများလိမ့်မည်။ (၁၅)-ဣနြေ္ဒမထား မိန်းမများကို မြှောက်စားရုံတော်တင်လိမ့်မည်။ (၁၆)-သူ့လင် ငါ့လင် လိုချင်လောဘ လင်လုမလည်း အယုတ်ထိုခါများလိမ့်မည်။ (၁၇)-ကျောင်းကန်ဇရပ်၊ အရပ်ရပ်ကို ခွဲဖျက်ပြုလုပ်များလိမ့်မည်။ (၁၈)-သတိမထား ကျင့်ဖေါက်ပြား၍ တရားမရှိ လူဒိဋ္ဌိတို့ အသေအပျောက်များလိမ့်မည်။ (၁၉)-တောင်ကြီး လမ်းကြီး အပြီးထိုခါပြိုလိမ့်မည်။ (၂၀)-မကြာခဏ လေပြင်းမုန်းတိုင်း မဆိုင်းထိုခါတိုက်လိမ့်မည်။ (၂၁)-သီလဖြူစင် ရဟန်းရှင်တို့ ထိုတွင်စိတ်ကြီးညစ်လိမ့်မည်။ (၂၂)-ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောင်အ၀ါလည်း မလင်းထိုခါ ညှိုးလိမ့်မည်။ (၂၃)-ကျောင်းကန်ဇရပ် အမြတ်မြတ်ကို လူဆိုးဖျက်၍ မချွတ်ထိုခါပြိုလိမ်မည်။ (၂၄)-ထိုသည့်အခါ ပြည်ရွာဆူပွတ် ငတ်မွတ်ဘေးကြီးဆိုက်လိမ့်မည်။ (၂၅)-မိုးလေမမှန် ကံသုံးတန်နှင့် တွေ့လိမ့်မည်။ (၂၆)-ကြီးသူစကား ငယ်သူနားမှာ အမှားထိုခါကြားလိမ့်မည်။ (၂၇)-လောဘပိတ်ဖုံး ပြည်လုံးဒိဋ္ဌိဖြစ်လိမ့်မည်။ (၂၈)-အမိမမြင် သားမမြင် ထိုတွင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိမ့်မည်။ (၂၉)-ထိုသည့်အခါ မိစ္ဆာအယူ ကြီးသူငယ်သား အယူမှား၍ တရားပျက်ကွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ (၃၀)-ကျင့်ဝတ်မမှန် စိတ်ဖေါက်ပြန်၍ တရားချွတ်ယွင်း မိမပျက်တို့ အဝတ်မလုံဖြစ်လိမ့်မည်။ (၃၁)-ပျိုပျိုအိုအို မောင်ကို အိမ်ထောင်ပြုလိမ့်မည်။ (၃၂)-အသရေထင့် လူ့အကျင့်လည်း မချွတ်ထိုခါပျက်လိမ့်မည်။ (၃၃)-ကျောင်းထိုင်ရဟန်း အကျင့်ဆန်း၍ ရဟန်းမယားယူလိမ့်မည်။ (၃၄)-အသရေအရှက် လူ့ကျင့်ဝတ်လည်း မချွတ်ထိုခါပျက်လိမ့်မည်။ (၃၅)-တစ်ရာ့တစ်ပါး လူမျိုးများလည်း ခြားနားမရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ (၃၆)-ကျောင်းအိမ်မရွေးတစိတ်ထဲလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ (၃၇)-မြို့ရွာပြည်သူ အပူဒုက္ခများလိမ့်မည်။ (၃၈)-ငတ်ကြီးမွတ်ကြီး ထိုဟာများလည်းဖြစ်လိမ်မည်။ (၃၉)-တရားမသိ မောဟမိ၍ ဒိဋ္ဌိထိုခါများလိမ်မည်။ (၄၀)-ဘုရားကျောင်းကန် ထိုအခါလည်း အမှန်မုချက်ပျက်လိမ့်မည်။ (၄၁)-ရတနာသုံးပါးဆိုသည်များကို အမှားလူထုထင်လိမ့်မည်။ (၄၂)-ကြီးသူအ၀တ် ငယ်သူဝတ် အဝတ်ထိုခါများလိမ်မည်။ (၄၃)-ရွှေငွေကိန်းပျောက် ရှေ့နောက်သိမြင် ရဟန်းရှင်လူ ခပ်သိမ်းသူမှာ စိတ်ပူသောကများလိမ့်မည်။ (၄၄)-သာသနာထွဋ် မြတ်ရဟန်းတို့ အနွမ်းထိုခါဖြစ်လိမ့်မည်။ (၄၅)-ဂုဏ်သရေရှိသူက သဘင်သမား၊ ဘုရားလူကြီးက ရွှေကိုခိုး၊ အမျိုးကောင်းသ္မီးကပိုက်ဆံ(ဖေးသာ)ရှာ၊ ဘုရားတကာကအရက်ရောင်း၊ ဘုန်းကြီးက ဇာတ်ကိုထောင်၊ရဟန်းတော်က ဘိန်းကိုစား၊ လင်ရှိမယားက အပျိုလုပ်၊ အရွယ်ယုတ်သူက အရောင်တင်၊ အပျိုမ၀င်ကရဲစား(ရည်းစား)ထား၊ ဆင်းရဲသားက သူဋ္ဌေးယောင်၊ အဝတ်ပြောင်မှ လူရိုသေ၊ အမိအဖက ကျွန်ယုတ်ကောင်း၊ သားသမီးက သခင်လောင်း၊ တောင်မြောက်မသိသူကို ရှေ့ဆောင်ထား၊ ငွေများလျှင် တရားနိုင်၊ ရုံးထိုင်သူကလျှာနှစ်ခွ၊ သဒ္ဓါအရေးပြောသူက တဏှာဖြစ်၊ ပဗ္ဗဇ္ဇိတရဟန်းက အဖေါ်ရောနှော၊ တကာဘုန်းကြီးနှင့် တကာမ၊ တရားပြသူက စာမတတ်၊ မတတ်ချင်သူက မသူတော်၊ လူဘော်လူကြွားမှ အများယုံ၊ ငွေကုန်ခံနိုင်မှ တရားတက်၊ ဘုရားတည်သူက အမြတ်စား၊ နတ်၊သိကြားကိုပြ၍ ငွေကိုယူ၊ ပေါ်တော်မူကို လှည့်၍ရောင်း၊ ကျောင်းကန်ဘုရားပြ၍ ငွေသတ္တာလုပ်၊ သုတ်အဘိဓမ္မာ သီချင်းဖြစ်၊ ချစ်ခင်သမျှ သမုဒ္ဒယ တဏှာ၊ ဥပသကာအလုပ်နှင့် မယားကိုကျွေး၊ အသက်မွေးမှုနှင့် ရဟန်းယောင်၊ သဒ္ဓါရှားပါးလို့ ဒါနကိုဝယ်၊ သံသရာရှည်တယ်လို့ အလှူကိုမပေး၊ အကြွေးပေးသူက ကျွန်နှင့်တူ၊ ကြွေးယူသူက သခင်ဖြစ်၊ မိဘအပေါ်မှာအဆိုးကြီးဆိုး၊ ယောက္ခမကိုတော့ အကောင်းပြော၊ ဗိုလ်မယားလုပ်ချင်သူက တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်သ္မီး၊ ကျောင်ထိုင်ဘုန်းကြီးမှ ဂုဏ်ထင်ပေါ်၊ ဘုန်းကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကို အပျို အအိုတွေကဝိုင်း၊ ဘုရားတံတိုင်းမှာ အိမ်ထောင်ပြု၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းလုပ်ရန် အောင်သွယ်လုပ်၊ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်က မိမကို ရဟန်းပြု၊ မယ်သီလက ပူဆွဲဆောင်မ၊ ဆောင်ဒါက အပျိုတစ်ခုလပ်၊ ကျမ်းကန်မတတ်သူက ပရမတ်စကားပြော၊ တရားဟောဘုန်းကြီးက ဟာသဖြစ်၊ နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းသမျှ ကြက်ဝက်သေ၊ အခါကြီးရက်ကြီးကြုံက အသားသတ်သူမှာ အမြတ်ရ၊ သီလဆောက်တည်သူက အကောင်းကြိုက်၊ လူမိုက်နှင့်ပေါင်းသူက အသက်ရှည်၊ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်သူကို လူမယုံ၊ ရိုးသားသူက အတိုးယူ၊ ကျောင်းကန်ဘုရား၌ ခိုက်ရန်ဖြစ်၊ ဆရာအသစ် ကျောင်းကိုထိုင်၊ မသေခင်က မိဖ ဆရားသ္မားကို ပုတ်ခတ် အမွေလု၊ မသာ အသုဘချသူက သီချင်းဆို၊ တရားမှန်ကို အမှားယူ၊ မယ်သူတော်က ရဲစား(ရည်းစာ)ထား၊ ဘုရားသွားရင်း လင်ရ၊ တရားနာရင်း အိမ်ထောင်ကျ၊ ဘာဝနာပွါးရင်း မျက်စောင်းထိုးလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ (၄၆)-ရဟန်းဦးစီး အပြီးထိုခါ မြို့ပြည်ရွာမှာ မဟာတပ်ကြီးဖွဲ့လိမ့်မည်။ (၄၇)-သာသနာတဝက်မချွတ်ထိုခါ မှန်စွာစစ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ (၄၈)-ပါပလူမျိုး အကျင့်ဆိုးတို့ အရိုးတောင်နှယ်ပုံလိမ့်မည်။ (၄၉)-မုဏိနှစ်ပါး ချွေးကားပြိုင်ပြိုင် ထွက်လိမ့်မည်။ (၅၀)-မြေကြီးငလျှင်လှုပ်လိမ့်မည်။ (၅၁)-မိုးပြင်းလေပြင်း တိုက်ခေတ်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ရွာပျက်လိမ့်မည်။ (၅၂)-ရမ်းဗြဲ မာန်အောင် အိမ်တစ်ထောင်နှင့် နှစ်ကောင်ကျွဲနွားကျန်လိမ့်မည်။ (၅၃)-ကျောက်တော်မြို့ကြီး အပြီးထိုခါပြိုလိမ့်မည်။ (၅၄)-ရမ်းဗြဲ မာန်အောင် သတိဆောင် ဥာဏ်ရောင်လင်းမှလွတ်လိမ့်မည်။ (၅၅)-မယူမြစ်ကြီး လှိုင်းကြီးထ၍ ရှိသမျှလူ ပြုန်းလိမ့်မည်။ (၅၆)-ဂစ္ဆပနဒီ သရီရမ်းချောင်း အပေါင်းလူတို့ပျက်လိမ့်မည်။ (၅၇)-မြန်မာပြည်ကို မသွယ်မှန်စွာ မသမာတရုပ်ဖျက်လိမ့်မည်။ (၅၈)-ကုလားတရုပ် ရန်ဘေးချက်ကြောင့် ဗမာ ရခိုင် ထိုခါစစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ (၅၉)-မြန်မာပြည်ကြီး အပြီးထိုခါပျက်လိမ့်မည်။ (၆၀)-အောက်သားမတစ်စုံ ဆန်တစ်ဒုံနှင့် လိုလိုသမျှ မုချထိုခါရလိမ့်မည်။ (၆၁)-ရွှေတိဂုံဘုရား မြတ်ရှင်စောကို ကုလား တရုပ်ဖျက်လိမ့်မည်။ (၆၂)-မြန်မာအများ လက်နက်စွဲကိုင် မခံနိုင်၍ စစ်ပြိုင်လည်းထိုး၊ အယုတ်ထိုခါ ရှေ့ဗမာတို့ သွေးချောင်းထိုခါစီးလိမ့်မည်။ (၆၃)-သုံးနှစ်တိုင်တိုင် အနိုင်ယူခါ မြန်မာပြည်ကို မသမာတရုပ်စိုးလိမ့်မည်။ (၆၄)-တရုပ်ကရှုံး ဗမာပြုန်း စုံးစုံးထိုခါနစ်လိမ့်မည်။ (၆၅)-ထိုသည့်အခါ ပြည်ဓညာမှာ မဟာမုဏိ စေတီမြတ်ကို ခွေးအမျိုးကုလားဆိုးတို့ လူမျိုးကိုဖျက် လုယက်တိုက်ခိုက်ပြုလိမ့်မည်။ (၆၆)-မျိုးမြတ်ရခိုင် ဓညပြည်သား ယောက်ျားမိမ ဒုတ်ဓားစသည် ရသည့်လက်နက် ဆွဲလျှက်ကိုင်ပြီး စစ်ကြီးထိုခါဖြစ်လိမ့်မည်။ (၆၇)-ထိုသည့်အခါ ရေမှာနဂါး ကျောက်ငနွားးတို့ ကြောက်၍ပေါ်လာ စစ်ပွဲမှာလည်း မှန်စွာမုချက်ရပ်လိမ့်မည်။ (၆၈)-ထိုသည့်အခါ မင်းစကြ်ာနှင့် ၀ိဇ္ဇာအပေါင်း ကူညီလောင်း၍ ရှိသမျှရန်စ ပြည်ဓညမှာ မုချက်ထိုခါရှင်းလိမ့်မည်။ (၆၉)-အနောက်ကုလား ပစ္စည်းများကို သင်္ဘောယာဉ်နှင့် မုချတင်ဆောင်ပြေးလိမ့်မည်။ (၇၀)-ရခိုင်ပြည်သား လူအများလည်း တရားထိုခါစောင့်လိမ့်မည်။ (၇၁)-ထိုသည့်အခါ မဟာမုဏိ ဘုရားကြီးလည်းပေါ်လိမ့်မည်။ (၇၂)-ရှင်တော်ဘုရားမှာ ပြည်မြန်မာက ကြွလာပြီးနောက် မြင့်မောက်ရှိနေ(ငါးကျီးတောင်ဖျား)မှာ ရုပ်ပွါးကိုယ်တော် ထိုခါသုံးဝါဆိုလိမ့်မည်။ (၇၃)-ထိုသည်အခါ ရွှေကျံဘုရား ကြွငြားအမှန်ရောက်လိမ့်မည်။ (၇၄)-ထိုသည့်အခါ သမိုင်းအရ ပြည်ဓညမှာ ရွှေအထင်ရှား သွန်းလုပ်ထားသည့် ဘုရားမဟာကျီ တစ်လီမကျန် ကြွရောက်လာလိမ့်မည်။ (ရ၅)-ရာဇာမင်းသား သွန်းလုပ်ထားသည့် ဘုရားမြတ်စွာ မှန်စွာထိုခါ ကြွရောက်လာလိမ့်မည်။ (၇၆)-တဖန်ထိုမှ မင်းစောလှ၏ တည်ထားဘုရား ဒုက္ကန်သိန်သို့ ကြွရောက်လာလိမ့်မည်။ (၇၇)-တပါးထိုသူ ဖယောင်းယူသည် မင်းဘူးတည်ထား ကိုးသောင်းလှိုင်ခေါင်း ကိုယ်တော်ကျိန်းလိမ့်မည်။ (၇၈)-ခုခါမတရား ကျင့်နေငြား၍ တရားဖျက်သူ အပူဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်။ (၇၉)-ထိုသံကြားရ ကြောက်ကိန်းလှ မုချထိုခါတွေ့လိမ့်မည်။ (၈၀)-ဘုရားမသိ ထိုပြည်ရွာမှာ မှန်စွာမုချပျောက်လိမ့်မည်။ (၈၁)-မူဆလင်ကုလား လူမျိုးများတို့ အများထိုခါပြန်လိမ့်မည်။ (၈၂)-ဖယောင်းလူမျိုးအကျင့်ဆိုးတို့ တန်ဘိုးမရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ (၈၃)-ထိုသည့်အခါ ပြည်ဓညာမှာ မဟာမြို့ကြီး ဝေသာလီမှာတည်လိမ့်မည်။ (၈၄)-မြောက်ဦးနန်းရာ မဟာသိမ်ကြီး အပြီးထိုခါဆောက်လိမ့်မည်။ (၈၅)-ရှင်တော်ဘုရား ကြွရောက်လာငြား မမှားထိုသိမ် ကျိန်းလိမ့်မည်။ (၈၆)-မင်းတို့ကြိုဆို လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ ထိုထိုသီလပြည့်လိမ့်မည်။ (၈၇)-ဖယောင်းလူမျိုး တန်ခိုးမရှိ ပြည်မြန်မာက ထွက်ခွာပြီးနောက် သူမင်း ငါမင်း အချင်းချင်းတို့ စစ်ခင်းထိုခါများလိမ့်မည်။ (၈၈)-တိုင်းသူပြည်သား လူအများမှာ အမိမဲ့သား ရေနည်းငါးသို့ မင်းကမရှိ ထင်မိထင်ရာ လူတကာတို့ မိစ္ဆာဝါဒ ကဲ့သို့ မမျှတရား နိုင်သူက ပြုလိမ့်မည်။ (၈၉)-မြန်မာ ရခိုင်ပျက်စီးတိုင်၍ ကယ်နိုင်သူရှား ပြည်သား ဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်။ (၉၀)-နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် စိုးသည့်မင်းစစ် မရှိခိုက်ကို အလိုက်သင့်စွာ နေတတ်ပါက တရားသူ တရားကူက လု့ယူမရဘဲ ဒုက္ခထွက်လိမ္မည်။ (၉၁)-ရတနာသုံးပါး မြတ်တရားကို အမြဲမကွာ ကိုးကွယ်ပါ၍ နေ့ညမပြတ် ဆည်းကပ်ကြပါလေ အို..ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့----------။ ဤသည်ကား စန္ဒာသူရိယမင်းလက်ထက် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ရခိုင်ပြည်သို ကြွချီလာ၍ ဟောကြားခဲ့သော ဗျာဒိတ်တရားတော်ဖြစ်လေသည်။ ရက္ခိင် သမိုင်းအမွီသျှင်
30 Oct 2017 · 1.9K views
#ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း နှင့် #အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာဆိုသည်မှာ... (#ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ) (#မှားမှန်းသိလျှက်နဲ့မပြင်ဘဲအများနောက်လိုက်ရင် #အမှားးတွေကြာပြီးအမှန်တွေပျောက်ကွယ်သွားမယ်) (#ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးပေးချင်တဲ့ပို့စ်တစ်ခုပဲ) "ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများ"ရဲ့ "လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတွေအကြောင်း"-စာတွေရေးပေးနေတာသိတော့ "ဒကာတစ်ယောက်"က.... အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ မြန်မာ တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမှာ အဲဒီလိုပဲ သတ်သေပြီးသေရတယ်-ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား၊ "ဟုတ်တယ်"ဆိုရင်, တပည့်တော် ဖတ်ဖူး တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ- ရဟန်းတစ်ပါး ဟာ ကိုယ့်လည်ပင်း ကိုကိုယ် ဓားနဲ့လှီးပြီး သတ်သေသွားပေမယ့် အဲဒီအခိုက်မှာ "ရဟန္တာ" ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ "ရဟန္တာ"ဖြစ်သွားရင် နောင်ဘဝ မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လားဘုရား၊ ဒါဆိုရင်, ဒီ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ခံရတဲ့ကိစ္စ တပည့်တော် ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ဘုရားလို့ မေးဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ "ဒကာ"ပြောမှပဲ ဘုန်းဘုန်းအတွေးထဲမှာ, ဒီ"အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ ကိစ္စ"နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွဲနေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အလွဲကို တင်ပြပေးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းနဲ့ အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာအကြောင်း"ကို "လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတစ်ခုအဖြစ်" အခုလို တင်ပြဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, အဲဒီလို- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် နောင်ဘဝ တွေမှာလည်း ဘဝပေါင်းငါးရာ တိုင်အောင် အခုလိုပဲ သတ်ပြီး သေရတယ်"ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ အတော့်ကိုလွဲနေတဲ့ အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရား ဟောမဟုတ်သလို... ကျမ်းဂန်မှာပါတဲ့အချက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ "ပိဋကတ်တော်"မှာလာတဲ့ "ဇာတ်တော်တစ်ခု"တော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ"ဇာတ်တော်"က- ဧကနိပါတ် ၊ မတကဘတ္တဇာတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ"ဇာတ်တော်"မှာ "ဒိသာပါမောက္ခ ဆရာကြီးတစ်ဦး"ဟာ, "သေသူ"ကို ရည်စူးပြီး "ဆိတ်တစ်ကောင်"ကို သတ်ဖို့ ရေချိုးပေးချိန်မှာ အဲဒီ"ဆိတ်"ဟာ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ရယ်လည်းရယ်ပြီး၊ ငိုလည်းငိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ "ဆရာကြီး"က... "ဘာကြောင့် ရယ်လည်းရယ်၊ ငိုလည်းငိုတာလဲ?"လို့မေးတော့ "ဆိတ်"က, ကျွန်ုပ်လည်း အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာ... အခု ဆရာကြီးလိုပဲ ဆိတ်တစ်ကောင်ကို လည်ဖြတ်သတ်ခဲ့မိလို့ အဲဒီ..."အကုသိုလ်ဝဋ်ကြွေး"ဟာ ဒီဘဝ အထိ "ဘဝပေါင်း (၄၉၉)ဘဝ" တိုင်တိုင် လည်ဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း။ ဒီလိုဝဋ်ကြွေးကို နောက် တစ်ဘဝပဲ ခံပြီးရင် ကုန်ဆုံးတော့မှာ... ဖြစ်တာကိုတွေးပြီး ဝမ်းသာလို့ ရယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့။ ငိုတာကတော့- အခု အကျွန်ုပ်ကို သတ်မယ့် "ဆရာကြီး"လည်း ကျွန်ုပ်လိုပဲ "ဘဝပေါင်းငါးရာ အသတ်ခံရတော့မှာပါလား"လို့ တွေးပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတဲ့အတွက် ငိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ "ဆရာကြီး"ဟာ ကြောက်လန့်ပြီး "ဆိတ်"ကိုမသတ်တော့ဘဲ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်... "အကုသိုလ် ဝဋ်ကြွေး"ရှိတဲ့ "ဆိတ်"ဟာ တစ်နေရာမှာ "မိုးကြိုး"ထိလွင့်လာတဲ့ "ကျောက်ချပ်"ထိပြီး လည်ပင်းပြတ်ကာ သေသွားခဲ့ရပါတယ်။ "ဝဋ်ကြွေး"ပါလာတော့တစ်ဦး မသတ်လည်း တစ်ခုခုနဲ့ သေသွားရတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ"ဇာတ်တော်လာ အကြောင်းအရာ"ကိုကြည့်ရင်- "ဆိတ်"ဟာ အတိတ်ဘဝ လူဖြစ်စဉ်က "ဆိတ်တစ်ကောင်"ကို သတ်ခဲ့မိတဲ့ "ဝဋ်ကြွေး"ကြောင့် "ဘဝပေါင်းငါးရာ"တိုင်အောင် အသတ်ခံပြီး သေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလို့ "အဖန်ငါးရာ၊ ဘဝငါးရာ"ခံရတာ မဟုတ်ဘဲ, သူများကို သတ်မိတဲ့ "အကုသိုလ် ဝဋ်ကြွေး"ကြောင့် ဘဝပေါင်းများစွာ အသတ်ခံရတဲ့ ဇာတ်တော်လာ အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ"ဇာတ်တော်"လာ အကြောင်းကို "နားစွန်နားဖျား" ကြားမိရာက "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ၊ငါးကမ္ဘာ ခံရတယ်"ဆိုပြီး မြန်မာများ အမှတ်လွဲနေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့... "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အတွက် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာအထိ အဲဒီလို ထပ်တူသတ်သေရမယ်"ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ "လွဲနေတယ်"ဆိုတာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတော့- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ခံရတာမဟုတ်ဘူး"ဆိုပြီး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာလည်း မလုပ်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။ လူအတော်များများက မဟုတ်တာဆို သိပ်ပြီးအတုယူတတ်တာ ဆိုတော့ သူများသတ်သေတာတွေကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမိမှာစိုးလို့ ပြောရတာပါ။ သေချာစဉ်းစားရမှာက... အဲဒီလို စိတ်ညစ်လို့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတဲ့ သူတစ်ယောက်"ရဲ့ "သေခါနီး စိတ်အစဉ်"ဟာ, ဘယ်လိုမှ "ကောင်းတဲ့စိတ်အတွေး" မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝ မှာ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ "သေခါနီးမှာဖြစ်တဲ့ စိတ်အစဉ်"ဟာ နောက်"ဘဝ"မှာ အရင် အကျိုးပေး တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် "သေခါနီးစိတ်အစဉ်"ဟာ "အထူးသတိပြုရမယ့် အချက်"ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ကား "သတ်သေမှု"နဲ့ ပတ်သက်ပြီး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာနဲ့ သူတပါးကို သတ်လိုက်တာ မှာ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အတွက် ဘဝငါးရာ အဖန်ငါးရာ အဲဒီလိုပဲ သတ်ပြီးသေရတယ်"ဆိုတာ... အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စကားဖြစ်ကြောင်းနဲ့၊ သူတပါးကို ကိုယ်က သတ်တာဆိုရင်တော့, သတ်တဲ့"စိတ်စေတနာ"အတိုင်း ဒီ"အကုသိုလ် ဝဋ်ကြွေး"ကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရတတ်ပြီး,"အကုသိုလ်"အပြစ် သိပ်ကြီးရင် "ဘဝပေါင်း ငါးရာ"အထိတောင် ခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုအပိုင်း"မှာလည်း- "ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်"ကိုမြင်ပြီး "ခန္ဓာကိုယ် ကို ငြီးငွေ့လို့ သတ်လိုက်တဲ့ အပိုင်း"မှာ "အပြစ်မရှိ"ပေမယ့်။ "ဒေါသအလျောက် သတ်မိရင်"တော့ အပြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ "အပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်"ဆိုတာ ခုနပြောသလို "သေခါနီး စိတ်အစဉ်"ဟာ မကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်, "သေပြီးနောက် အပါယ်ဘုံဘဝ"တွေအထိ ရောက်စေနိုင်တာဖြစ်လို့ "အပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်"လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဗုဒ္ဓ"လက်ထက်က ဝဂ္ဂလိ အမည်ရှိတဲ့ "မထေရ်တစ်ပါး"ဟာ"ခန္ဓာကိုယ်"ကိုငြီးငွေ့ပြီး "ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပြစ်"ကိုမြင်တဲ့အတွက် "ကိုယ့်လည်ပင်း ကို ဓားနဲ့ဖြတ်ပြီး သတ်ခဲ့တယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်, အဲဒီ"မထေရ်"ဟာ ဒီအခိုက်မှာ "ဝေဒနာ"ကိုရှု လိုက်တဲ့အတွက် "ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်"-လို့ ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ် ပါဠိတော် (၄၉) မှာ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်- "ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပြစ်"ကိုမြင်ပြီး "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အပိုင်း"မှာ ဒီလိုသတ်သေလိုက်တဲ့အတွက် "အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ခံစရာမရှိတော့ဘူး"ဆိုတာ သတိပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက- မြန်မာအများ အမှတ်မှားနေကြတဲ့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ အဲဒီလိုပဲ သေရတယ်"ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လွဲနေတဲ့ အယူအဆဖြစ်ကြောင်း၊ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်တဲ့ကံ"မဟုတ်ဘဲ "သူများကို သတ်ခဲ့တဲ့ ပါဏာတိပါတ ကံ"မျိုးကသာ "ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံ အကြီးအသေး"ကိုလိုက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ "ဘဝ ပေါင်းငါးရာ"အထိ ပြန်လည် အသတ်ခံရတတ်ကြောင်း ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အပိုင်းမှာ "ပါဏာတိပါတကံ မမြောက်"တဲ့အတွက် "ပါဏာတိပါတကံ ကို ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်"အတိုင်း ပြန်ခံရတာတွေ မရှိပေမယ့်, "လောကဓံ"ကို မခံနိုင်လို့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့ သူတစ်ယောက်"ဟာ အသေ မကောင်းတဲ့အတွက် "ဘဝကူး" လည်း မကောင်းနိုင်တာဖြစ်လို့ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာလည်း လွဲနေတဲ့ အလွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း" သိစေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်- "လွဲနေကြတဲ့ အလွဲ"တွေထဲမှာ- "ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ အဲဒီလိုပဲ သတ်သေရတတ်တယ်"ဆိုတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ "အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အလွဲဟာလည်း နည်းနည်းလေးမဟုတ် "အများကြီးကို လွဲနေတဲ့ အလွဲတစ်ခု"သာ ဖြစ်တဲ့အတွက်။ ဒီလိုအလွဲမျိုးကို... အစဉ်အဆက် အရိုးစွဲနေအောင် မလွဲမိကြဖို့နဲ့ တကယ် သတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိလေသာတွေကိုသာ အပြီးသတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ အသိပေးတိုက်တွန်းရင်း.... လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတစ်ခုအဖြစ် အသိဝင်ကာ ပြုပြင်နိုင်ဖို့ စေတနာထား မေတ္တာအားဖြင့် အသိစကား ပါးလိုက်ရပါတယ်။ ဖတ်ဖူး မှတ်သားဖူးသောစာစုများကို ဓမ္မဒါပြန်လည်မျှဝေပူဇော်ပါသည်
OO Aung Kyyaw
25 May · 25 views